download yakundikana hutachiona yaonekwa
Kana wakacherechedza a Kudhaunirodha Kwakundikana - Virus yaonekwa message on Windows 10 apo wakaedza kutora faira kubva paIndaneti uchishandisa chero browser chero yakafanana neChrome, Firefox, nezvimwewo, iwe unoda kuziva kuti ndeyako Windows Defender antivirus anoedza kuchengetedza hurongwa hwako kubva pakutsvaga kunotyisa.
Munyika yekunyepedzera yeinternet, anti-virus software inoita basa rakakosha mukudzivirira iyo system kubva kuma software mavhairasi. Nepo isu tichiziva izvo zvinogona kutyisidzirwa kubva kuzvirongwa zvakaipa, iyo anti-hutachiona inochengetedza system yako kubva kutyisidziro dzekuchengetedza. Iyo anti-virus chishandiso inotadzisa mushandisi kubva kurodha pasi isina kuvimbika software. Nekukwira kwakanyanya mu cybercrime, Iyo inogara iri tsika yakanaka kuve neayo antivirus software yakaiswa uye kuichengeta iri padanho.
Nepo chirongwa cheantivirus chichiita basa rakakura nekukuzivisa iwe kune yakaipa faira iri mune software yaunoda kurodha pasi, unogona imwe nguva kugashira nhema nhema. Nekunyepa kwekureva isu tinoreva, chishandiso chinogona kuratidza zvisirizvo nezve kuvapo kwemarware muchirongwa che software. Kunyangwe iwe uchidavira kuhuchokwadi hwesaiti kubva kwaunoda kurodha pasi, bhurawuza rinokudzivirira iwe kubva kurodha pasi iyo faira nekukutumira iwe yekuzivisa meseji nezve malware uye maantivirusi. Muchiitiko ichi, iri software yeantivirus iri kukutadzisa kurodha pasi iyo faira uye haina chekuita nebrowser.
Kudhaunirodha Kwakundikana - Virus yaonekwa
Kana iwe uri mushandisi weChannel, mushandisi anoyambirwa neshoko rinoti "Zvatadza - Utachiona hwaonekwa". Kana bhurawuza iri Microsoft Edge, ipapo unogona kunyeverwa neshoko rinoti "[filename] rine hutachiona uye rakabviswa" uye kana uripo Windows Taskbar inongoratidza meseji "Malware yaonekwa".
Kana iwe unonyatsoziva nezvehuchokwadi hwehuwandu hunobva kupi kwauri kutsvaga faira, iwe unogona kunge uchida kuisa chimwe chinhu muhutachiona chako. In Windows 10, Microsoft Windows Defender inodzivirirwa-mukati kubva kune malware inobvisa hutachiona uye mamwe mafaera asingadiwe. Zvirongwa zvekuchengetedza dzimwe nguva zvinodzivirira kurodha pasi kwefaira pane iyo Windows michina yekudzivirira kubva kutyora kutyora. Unogona kutangazve kurodha pasi kwefaira nemamwe ma tweaks mu Windows Tsigira.
Aya anotevera matanho anokutungamira iwe mukumisikidza yakasarudzika mu Windows Defender software.
Iwe unofanirwa kuita izvi bedzi kana iwe unonyatsoziva kuti faira iri kunyorerwa yakachengeteka uye kubva pane inotendwa.
Open Windows Defender Security Center uye tinya pane iyo Utachiona & kutyisidzira kuchengetedzwa nhoo. Tora pasi pasi zvishoma uye chengeta Nyora nhoroondo. Iwindo rinotevera rinotanga.
Kana iwe ukaona faira iri Kuchengetedzwa kwekutyisidzira chikamu, ona uye uwedzere faira yawakangoshandiswa kune urongwa hwekutsvaga, nekusarudza Rega chinhuKunze kwekuti iwe uite izvi, uchaona faira pasi Kubvumira kutyisidzirwa.
Zvino edza kutora faira zvakare.
Kana iwe uchiri nechinetso nekukanda faira, iwe unogona kunge uri kushandisa imwe yehutachiona software inogona kunge ichidzivirira kuregera. Iwe ungazofanira kuchenesa faira mune iyo software zvakare.
12 yakanakisa antivirus software ine ishandisi inogadziridza [2020 Nhungamiro]
Iyo Yakanyanya Virus & Malware Scanners YAKANYANISWA Kune Nuke Chero Hutachiona
5 akanakisa software antivirus ine yakanyanya kuwongorora chiyero
Yakagadziridzwa nyowani Android malware inoratidzira yazvino shanduko yefoni rudzikunuro
Unoda antivirus app yako Android foni? Heano sarudzo dzakanakisisa
Sisitimu yekudzorera yakundikana nekuda kweye antivirus kukanganisa [Full Fix]